पोखरा महानगरमा कांग्रेसको उम्मेदवारी आवश्यकताभन्दा कम :: Setopati
पोखरा महानगरमा कांग्रेसको उम्मेदवारी आवश्यकताभन्दा कम
युवराज श्रेष्ठ पोखरा, भदौ २६
नेपाली कांग्रेसको पोखरा महानगर कार्यसमितिमा पदाधिकारी बन्न उम्मेदवारको लर्को देखिएको छ।
महानगर कार्यसमितिमा भने आवश्यकभन्दा कम संख्यामा मात्र उम्मेदवारी परेको छ। तर, सदस्य पदमा भने आवश्यकभन्दा न्यून संख्यामा मात्र उम्मेदवारी परेको निर्वाचन समिति कास्कीले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार पोखरा महानगरमा १६५ सदस्यीय कार्यसमिति रहन्छ। अधिवेशनका लागि शुक्रबार भएको मनोनयन दर्तामा आवश्यकभन्दा ३१ जना सदस्य संख्या अपुग हुने गरी उम्मेदवारी परेको छ। जसमा महिला, दलित, जनजातिको कोटाका उम्मेदवारी सबभन्दा कम रहेको निर्वाचन समिति कास्कीले जनाएको छ।
पोखरा महानगर समितिको सभापतिका लागि सुरेन्द्रमान विजुक्छे, रामराज लामिछाने, मोहनप्रसाद बाँस्तोला, मिलनप्रसाद तिवारी, ज्योति हमाल र गंगाधर पराजुली उम्मेदवार बनेका छन्।
यस्तै, २ जना उपसभापतिका लागि कृष्णप्रसाद अधिकारी, निर्दोषविक्रम पौडेल, प्रयागराज भण्डारी, भवसागर बराल, शिव केसी र राजेन्द्र बरालले उम्मेदवारी दिएका छन्।
महानगर समितिको २ जना सचिव पदका लागि गणेशबहादुर थापा, टुवराज बास्तोला र सुरेन्द्रबाबु तिवारीले उम्मेदवारी दिएका छन् भने २ जना सहचिवका लागि नरेन्द्र बाँस्तोला, पुष्पराज सिग्देल, रविन कायस्थ, लक्ष्मी बाँस्तोला, शिवमोहन अधिकारी, सञ्जय आले र संघर्ष कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
कांग्रेसको विधानले कार्यसमितिमा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई कोषाध्यक्षमा मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान छ।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपूर्व नै पोखरा महानगरमा उम्मेदवारी दर्ता सुरू भइसकेको थियो।
निर्वाचन समितिले शुक्रबार दिउँसो निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित गरेको थियो।
उक्त तालिका अनुसार स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ गते हुनेछ।
यो तालिका आउनुअघि नै पोखरामा अधिवेशनका लागि मनोनयन दर्ता थालिएको थियो।
कास्की कांग्रेसको निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता आरसी बिमलले पोखरा महानगर कार्यसमितिको उम्मेदवारहरूको शुक्रबार मनोनयन दर्ता गरेर शनिबार प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका बनाएका थिए।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रकाशित गरेको अघिल्लो निर्वाचन तालिका अनुसार भदौ २७ गते आइतबार पालिका स्तरको अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार शुक्रबार नै मनोनयन दर्ता गरेको निर्वाचन अधिकृत बिमलले बताए।
नेपालकै ठूलो महानगरपालिका पोखरा कार्यसमितिमा पदाधिकारीमा आवश्यकभन्दा ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी परे पनि सदस्य पदमा भने कम उम्मेदवारी परेको छ। केही वडामा आवश्यक संख्यामा मात्रै उम्मेदवारी परेकाले उनीहरू स्वत: निर्वाचित हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
कांग्रेसको विधान अनुसार स्थानीय तह स्तरीय कार्यसमितिमा प्रत्येक वडाबाट १ जना महिलासहित ३ जना सदस्य हुनेछन्।
यस्तै, दलित, जनजाति, खस, आर्य, महिला, अल्पसंख्यक लगायतका लागि आरक्षणको व्यवस्था छ।
पोखरा नगर कार्यसमितिका लागि शुक्रबार भएको मनोनयन दर्ता अनुसार वडा नं. १, ३, ४, ६, ७, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३३ गरी २२ वटा वडामा आवश्यक संख्यामा मात्र उम्मेदवारी परेका छन्।
यही उम्मेदवारी अन्तिम भएको अवस्थामा यी वडाका उम्मेदवार सर्वसम्मत सदस्यमा निर्वाचित हुनेछन्।
यस्तै, वडा नं. २० बाट नगर कार्यसमितिका लागि १ जनाले पनि उम्मेदवारी दिएका छैनन्।
उक्त वडाबाट सर्वसम्मत रूपमा नगर कार्यसमितिमा सदस्यको नामावली आए पनि उम्मेदवारी दर्ता नभएको निर्वाचन अधिकृत बिमलले बताए। आवश्यकभन्दा कम संख्यामा वडा नं. ८ मा परेको छ।
नगर कार्यसमितिमा वडाबाट १ जना महिलासहित ३ जना सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान रहे पनि उक्त वडामा १ जना महिला र १ जना पुरूषले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
यस्तै, आवश्यकभन्दा धेरै संख्यामा वडा नं. २, ५ र ९ मा उम्मेदवारी परेको छ।
नगर कार्यसमिति सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेकामध्ये कसैले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएमा उक्त वडाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूबीच निर्वाचन हुनेछ।
देशकै ठूलो पोखरा महानगरपालिकामा ३३ वटा वडा छन्।
कांग्रेसको विधान अनुसार पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचन हुँदा १६५ सदस्यीय नगर कार्यसमिति बन्छ।
विधान अनुसार आरक्षण कोटामा आवश्यक भन्दा कम संख्यामा उम्मेदवारी परेको निर्वाचन अधिकृत विमलले जानकारी दिए।
पोखरा महानगर कार्यसमितिका लागि खस आर्य तर्फबाट १५ महिलासहित ३० जना सदस्यको ठाउँमा २२ जनाले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
आदिबासी जनजाति कोटामा १२ महिलासहित २५ जनाको ठाउँमा १० जना र दलिततर्फ ४ महिलासहित ९ जनाको ठाउँमा ३ जनाले मात्र उम्मेदवारी दर्ता गरेको छ।
यस्तै, १ जना मुश्लिम कोटामा १ जनाले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
मधेशी कोटा १ जना उम्मेदवार बन्न पाउने भए पनि पोखरामा उम्मेदवारी परेको छैन।
अपाङ्गता प्रदेश सभाा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा १ जना महिलासहित २ जनाको कोटामा २ जनाले मात्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य कास्कीमा मात्र १९ हजार बढी छन्। जसमा सबभन्दा धेरै पोखरा महानगरमै रहेका छन्।
वडा अधिवेशनबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्नेको संख्या पनि महानगरमै धेरै छ। निर्वाचन समितिका अनुसार पोखरा महानगरमा वडा समितिका सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि गरी पोखरा महानगरका १ हजार ३७० जनाले मतदान गर्न पाउनेछन्।
कास्कीका बाँकी ४ वटा गाउँपालिकामध्ये माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा १७३, मादीमा १९२, अन्नपूर्णमा १९८ र रुपा गाउँपालिकामा १३० जना मतदाता छन्।
पोखरा महानगरमा ठूलो संख्यामा क्रियाशील सदस्य र क्षेत्रीय प्रतिनिधि रहे पनि उम्मेदवारी कम परेको हो।
शुक्रबार दर्ता भएको मनोनयनकै आधारमा असोज ९ गते अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको निर्वाचन अधिकृत बिमलले बताए।
केन्द्रीय निर्वाचन समितिले निर्देशन दिएमा फेरि पनि उम्मेदवारी दर्ताका लागि समय दिन सकिने उनको भनाइ छ।
अहिले दिएको उम्मेदवारीकै आधारमा महानगरको अधिवेशनमा उम्मेदवार सक्रिय हुने कास्की कांग्रेसका सभापति कृष्ण केसीले बताए।
‘केन्द्रले तोके अनुसारकै मितिमा अधिवेशन हुन्छ, अहिले उम्मेदवारी दिएका साथीहरूको उम्मेदवारी त्यतिबेलासम्मै कायम रहन्छ,’ सभापति केसीले भने।
परिवर्तित महाधिवेशन तालिका अनुसार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता र अहिले दर्ता भएका उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पनि प्रशस्त समय मिलेको उनले बताए।
पोखरा महानगर कार्यसमितिको उम्मेदवारीका विषयमा केही भ्रम परेको र शुक्रबार दिउँसो अधिवेशन सरेका कारण उम्मेदवारी कम परेको उनले टिप्पणी गरे।
‘वडाबाट नगर समितिमा आउँदा नै महिला सदस्य अनिवार्य भनेकाले कतिपयले त्यसैलाई आरक्षण माने,’ उनले भने, ‘दिउँसो अधिवेशन सरेको सूचना आएका कारण केही साथीहरूले उम्मेदवारी दिनुभएन।’
महिला, दलित, जनजाति लगायतका क्षेत्रबाट पार्टीको क्रियाशील सदस्य बढेको भन्दै सभापति केसीले असोज ९ गते अधिवेशन हुनुअघि मनोनयन दर्ता गर्दा सबै पदमा उम्मेदवारी पर्ने बताए।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २६, २०७८, १९:३५:००